Famoaham-boky literatiora: hiketrika an’i “Vonisoa” sy i “Mendrika” i Zara Ainga - ewa.mg
Famoaham-boky literatiora: hiketrika an’i “Vonisoa” sy i “Mendrika” i Zara Ainga
News - Famoaham-boky literatiora: hiketrika an’i “Vonisoa” sy i “Mendrika” i Zara Ainga
Ny taona 2015 sy ny tapatapaky ny taona 2016,
niafin’endrika tao amin’ny kaonty «facebook» i Zara Ainga. Toerana
nizarany ny sanganasany, nahababo olona maro, indrindra ireo
tovovavikely (Babon’ainga). Angamba mety ho anisan’ireny i
« Vonisoa » sy i « Mendrika »…
Poetan’ny tam­ba­jo­tra… Na­hay
nitrandraka ny teknolojia ho fitaovam-pandrosoana eo amin’ny
sehatry ny literatiora i Herinirina Tojosoa, fantatry ny maro
amin’ny hoe, Zara Ainga, eo amin’ny tontolon’ny haisoratra
malagasy. Anisan’ny mitantana ny fikambanana “Y-sorakanto”,
fikambanana nijoro efa ho roa taona, izy. Dimy taona katroka
nanoratana amin’ity oktobra ity ny lehilahy ary hamoaka boky ho
Ny fahadimy sy fahenina no vokatra mivoaka izao: i «Vonisoa»
amboaran-tononkalo ahitana pejy 100, izay miresaka fitiavana
angalarina sy ny fiainana maro hafa. Ao koa i «Mendrika», izay
am­bo­aran-tsombintantara, 200 pejy. Sombintantara amin’ny lafiny
maromaro, toy ny fitiavana misandrahaka amin’ny endriny maro:
fitiavan-tanindrazana, fitiavan’olon-droa, fitiavana amin’ny samy
Manoratra karazana literatiora i Zara Ainga. Anisan’ny manavanana
azy ny fanoratana tononkalo sy ny sombintantara. Maro ny hetsika
efa nanehoany ny talentany, in­drindra ny teto Iarivo. Nisy ny boky
manokana efa nivoaka tao anatin’izay dimy taona izay, toy ny “Ilay
dokoterakeliko”, ny “Hafeniko tsy ho fantany”, “Iny taratasiko
iny”… Ao ireo niarahana ami­na namana, toy ny “Sa­ka­ma­laho sy
Havozo”, tamin’i Tsy Avahana.
Ilaina ny famakiana
«Betsaka ny tanora miroso manoratra
ankehitriny. Vaovao tsara izay, saingy, hadinon’izy ireo hoe tia
mamaky aloha vao manoratra. Mila tia mamaky boky isika raha te
hamokatra asasoratra kanto satria betsaka ny pitsopitsony tokony
hizarana sy tokony ho fantatra mba tsy hampivoaka ny fitsipika
mamaritra ny karazana literatiora ary mba tsy ampifangaro ny
zavatra atao amin’ny kolontsaina hafa . Izay ny zava-dehibe
aloha.», hoy i Zara Ainga.
Ny fiezahana mampiakatra ny lanjan’ny literatiora malagasy,
hahafahana mandray anjara asa tsara any amin’ny
fanabeazana…Mamerina ny fitiavan’ny olona ny boky amin’ny fiteny
malagasy no anisan’ny tanjon’ity mpanoratra manana ny mampiavaka
azy eo amin’ny literatiora ity.
L’article Famoaham-boky literatiora: hiketrika an’i “Vonisoa” sy i “Mendrika” i Zara Ainga a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 17/10/2020
Lalana Mahitsy-Antanetibe Mahazaza: tokony ho vita godirao amin’ny 2021 ny asa
Vaky ny 10%-n’ny atody, mivoaka any Mahitsy mandritra ny fitaterana azy mankaty an-tanàn- dehibe noho ny haratsian-dalana. Hatao godirao ny lalana Mahitsy-Antanetibe, hamahana izany olana izany.Nanomboka ny 13 aogositra 2018 ny asa fa­nam­boaran-dalana, miainga eny Mahitsy, Ampanotokana hatrany amin’ny kaominina Antanetibe Mahazaza, samy ao anatin’ny distrikan’Am­bohidratrimo. Mitentina 30 tapitrisa dolara ny asa, famatsiam-bola maimaim-poana nomen’ny governemanta sinoa ho antsika Malagasy. Tafiditra ao anatin’ilay Finiavana Fi­famatorana sy lalana (Initia­tive la ceinture et la route), napetraky ny fitondrana sinoa hanamorana ny fifevivezen’ny olona sy ny entana. Raha ny fifanarahana, mi­refy 19,087 km ity lalana Ma­hitsy-Antanetibe Maha­zaza ity. Maharitra telo taona ny asa, tokony ho vita amin’ny taona 2021. Hatao godirao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ka manatanteraka azy ny orinasa sinoa Zhongmei group. Nankatoavin’ny filan-kevitry ny minisitra, ny 7 ok­tobra teo, ny famelana malalaka, tsy mandoa haban-tseranana ao anatin’ny fotoana voafetra ny fampidirana ny entana sy fitaovana ilain’ity orinasa sinoa ity.Hiroborobo ny fandrosoanaMiisa 30.000 ny mponina any amin’ny kaominina Ma­hitsy sy Ampanotokana. Mi­velona amin’ny fiompiana akoho sy ny famokarana atody ny 80%-n’ny mponina. Avy any an-toerana ny 40%-n’ny atody eto an-dRenivohitra. Raha vita ity lalana ity, vinavinaina ho 150.000 isan’andro ny atody hivoaka any an-toerana. Etsy an-kilany, hiroborobo haingana iny faritra iny ao­rian’ny fahavitan’ny lalana. Hitombo ny fivezivezen’ny olona sy ny entana. Handroso ny varotra, ny fifandraisan-davitra. Ho mora kokoa ny lafiny fitsaboana satria ho akaiky ny hopitaly eny Ma­hitsy.Njaka AndriantefiarinesyL’article Lalana Mahitsy-Antanetibe Mahazaza: tokony ho vita godirao amin’ny 2021 ny asa a été récupéré chez Newsmada.
Fotodrafitrasa IEM: 204 tapitrisa euros avy amin’ny Fed
Manohana ny fandaharanasan’ny fanjakana, Finiavana ho fisandratana ho an’i Madagasikara (IEM), ny Vondrona eoropeanina (UE). Ho azy, iankinan’ny fampandrosoana ny lafiny fotodrafitrasa, anisan’ny zava-dehibe ao anatin’ny Fandaharanasa tondro ho an’ny firenena, na Programme indicatif national (PIN), mifandraika amin’ny Tahiry eoropeanina ho an’ny fampandrosoana, andiany faha-11 (11è Fed), mitentina 204 tapitrisa euros ho an’ny fotodrafitrasa. Nilaza ny tompon’andraikitry ny fandaharanasa Birao manohana ny fiaraha-miasa amin’ny any ivelany (BACE), Andriamalala Fanilo Herizo, fa tanjona ny fampitomboana ny fivezivezen’ny olona sy ny fananany, amin’ny alalan’ny fanatsarana ny lalana sy ny fitaterana, ny sehatry ny angovo, ny rano sy ny fanadiovana.Miisa valo ny tetikasaMaromaro ny mpamatsy vola, toy ny Fed, ny Antokon-draharaha frantsay ho an’ny fampandrosoana (AFD), ny Banky eoropeanina ho an’ny fampiasam-bola (BEI), ny Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Bad) ary ny fanjakana malagasy.Ahitana ny tetikasa tantsoroka ara-drafitra (6 tapitrisa euros avy amin’ny Fed). Faharoa ny fanatsarana ny lalana RN 6 sy ny RN 13, (115 tapitrisa euros avy amin’ny Fed ; 114,7 tapitrisa euros avy amin’ny BEI ; 4,1 tapitrisa euros avy amin’ny fanjakana malagasy). Fahatelo, fanamboarana ny arabe Rocade Est sy Nord-Est eto Antananarivo, mitotaly 62,9 tapitrisa euros. Fahefatra ny Tetikasa ho an’ny fanadiovana hentitra eto Antananarivo (PIAA), mitentina 34,1 tapitrisa euros. Fahadimy, fanadiovana ny tanàna manodidina an’Antananarivo, ny tetikasa « Lalankely III », hanampiana ny olona sahirana, mitentina 26,3 tapitrisa euros. Fahenina, fanarenana ny lalana RNT 12A sy ny RN9, mitentina 183,1 tapitrisa euros. Fahafito ny tetikasa “Jirama water III”, mitentina 73,2 tapitrisa euros, hanatsarana ny fahazoana rano madio fisotro. Farany ny tetikasa “Sunrise Madagasikara”, hanamorana ny lafiny angovo, mitentina 39,9 tapitrisa euros.Njaka A.L’article Fotodrafitrasa IEM: 204 tapitrisa euros avy amin’ny Fed a été récupéré chez Newsmada.
FID sy ny Marie Stopes Madagascar: hohatsaraina ny fananahana ara-pahasalamana
Hiara-kiasa hanatsara ny fandrindram-piterahana ny Fonds d’intervention pour le developpement (Fid) sy ny Marie Stopes Madagascar (MSM). Hiantefa amin’ireo tokantrano mpahazo tombontsoa amin’ny fiahiana sosialy karakarain’ny Fid ny asa. Hanentana sy handray an-tanana ny fananahana ara-pahasalaman’ny fianakaviana ny tomponandraikitry ny MSI, mandritra ny herintaona. Tsy misy sorabola mivantana atokan’ny Fid ho an’ny MSI hanatanterahana ny asa fa hanolotra fanampiana fotsiny amin’ny fahaiza-manao sy ny fitaovana.« Misy fiantraikany amin’ny fivoaran’ny fiainan’ny mponina ny fiovam-pihetsika amin’ny fandrindram-piterahana », hoy ny tale jeneraliny mpisolo toerana ao amin’ny Fid, Rajao Harilala Serge, omaly teny Anosy. Efa manao sahanasa hanampiana ny mpahazo tombontsoa ny Fid hananan’izy ireo fahaleovantena amin’ny fiainana andavanandro ka hanatsara bebe kokoa ny fari-piainany raha voarindra ny fiterahana. Hanetsika ireo mpanentana misehatra eny ifotony ny Fid handresy lahatra ny isan-tokantrano hanatona ny ivontoerana manome ny tolotra avy amin’ny MSM. Mbola hiofana manokana ireo mpanentana hampahomby ny fandresen-dahatra.Vonjy A. L’article FID sy ny Marie Stopes Madagascar: hohatsaraina ny fananahana ara-pahasalamana a été récupéré chez Newsmada.
Parlemantera avy eto Toamasina : Nanolotra fanampiana ho an’ny FFKM
Vary 50 gony, aron-tava 2.000, menaka anaty tavoahangy 120 litatra, ireo no natolotry ny fikambanana parlemantera nahitana ireo depiote avy eto Toamasina, notarihan’ny filoha lefitry ny antenimierampirenena eto Toamasina, Rtoa Bavy Angelica, izay natolotra ireo filoham-piangonana eo anivon’ny FFKM Toamasina, entina hanampiana ireo marefo eny anivon’ny fiangonana sami- hafa eto Toamasina. Tao amin’ny “maison des parlements” teny Mangarano II misy ny biraon’ny distrikan’i Toamasina no nanaovana izany fanolorana fanampiana izany. Nandray izany ny solon-tenan’ny FFKM Toamasina ny Mgr Solo avy amin’ny fiangonana Anglikana, notronin’ny governoran’ ny faritra Atsinanana, ary ny ben’ny tananan’i Toamasina renivohitra. Nandritra izany no nilazan’ny governora fa mangataka vavaka amin’ireo filoham-piangonana sy ireo mpino rehetra ny eto Toamasina, mba hentintsika mandresy miaraka ity valanaretina covid-19 ity; izay lasa tsy kapitaly ekonomika intsony i Toamasina, fa lasa kapitaly epidemika indray. Niangavy ny rehetra hiray hina sy hanaraka an-tsakany sy an-davany ny fepetra rehetra napetraky ny fanjakana amin’izao valanaretina izao ireo filoham-piangonana eo anivon’ny FFKM, satria tsy misy fomba mahomby hentina miady amin’izany valanaretina izany, raha tsy ireo fepetra ara-pahasalamana efa napetraka ireo ihany, indrindra fa ny fijanonana an-trano ho an’ireo tsy misy zava-dehibe tena atao ivelan’ny trano. Malala Didier L’article Parlemantera avy eto Toamasina : Nanolotra fanampiana ho an’ny FFKM est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Parlemantera avy eto Toamasina : Nanolotra fanampiana ho an’ny FFKM a été récupéré chez Midi Madagasikara.
VOKA-PIFIDIANANA :: Nanitsy ny tarehimarika sasany navoakany ny Ceni
Dimy andro aty aoriana, nahitsin’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na ny Ceni, omaly, ny tarehimarika sasany tamin’ ny voka-pifidianana navoakan’izy ireo, tamin’ny sabotsy 17 novambra lasa teo. Niova ho 5 367 871 ny isan’ny mpifidy nandatsa-bato raha 5 367 447 no nampaha- fantarina tamin’ny rehetra. 4 975 018 kosa no tena isam-bato manan-kery fa tsy 4 974 612, ary 392 853 no isan’ireo vato maty sy ny vato fotsy fa tsy 392 835, araka izay vokatra vonjimaika navoaka ôfisialy, dimy andro lasa izay. Nilaza ny Ceni fa “tsy misy fiantraikany amin’ny vato azon’ireo kandidà tsirairay izany”, araka ny fampitam-baovao avy amin’izy ireo, omaly. Nialoha izao famoahana fanitsiana avy amin’ny Ceni, omaly hariva, izao dia nisy ny lanonana fanaovan-tsonia ny fanampiana ara-bola mitentina 1, 100 tapitrisa euros avy amin’ny Vondrona Eoropeanina ho amin’ny fikarakarana ny fifidianana na ny Sacem izay tantanan’ny Sampan’ny Firenena Mikambana misahana ny fampandrosoana na ny Pnud, teny Nanisana, omaly maraina. Nanindry mafy ny filohan’ ny Ceni, Rakotomanana Hery, teny an-toerana, fa “tsy nisy hosoka, tsy nisy fanodinkodinana vato ary tsy mitombina velively ny hala-bato teo anivon’ny Ceni.” “Matoa nisy ny lesoka dia mety ho avy amin’ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa na tsy fifehezan’ ny mpiara-miombon’antoka sasany ny asa nataony”, hoy izy. “Vonona izahay hanokatra ny kajy mirindra (Logiciel) izay nampiasaina eo anatrehan’ny rehetra raha mandidy manao izany ny Fitsarana. Tsy tokony hisy fiovana lehibe ihany koa ny voka-pifidianana navoakanay sy ny havoakan’ ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana”, hoy hatrany Rakotomanana Hery. Nanaitra anefa ny fandraisana an’io fanitsiana an’ireo tarehimarika sasany tamin’ny voka-pifidianana feno vonjimaika, izay nalefan’ izy ireo omaly io. L’article VOKA-PIFIDIANANA :: Nanitsy ny tarehimarika sasany navoakany ny Ceni est apparu en premier sur AoRaha.
Fantatra fa efa nandona fiara iray hafa teny Ankadifotsy no nitsoaka nandositra ity fiara 4X4 nahavanon-doza tetsy Ankazomanga, omaly ity. Ankoatra ireo olona efatra naratra mafy, maty tsy tra-drano ny tovolahy iray voafaokany.Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Ankazomanga, omaly maraina. Fiara 4×4 iray nizotra ho any Andraharo no niala bisikileta iray teo alohany ka tafavoaka ny arabe ary nifatratra tamin’ny fiara iray nijanona amoron-dalana (P. 306) sy mpandeha an-tongotra miisa telo. Tovolahy iray 25 taona maty tsy tra-drano. Lehilahy lehibe iray 52 taona sy vehivavy iray 20 taona kosa naratra mafy. Naratra ihany koa ilay mpitondra bisikileta teo alohany sy mpitondra moto iray izay nanaraka ilay fiara tao aoriana. Nandriaka eran’ny arabe ny ra. Tampoka rahateo ny fiavian’ny loza satria nandeha mafy mihitsy ilay fiara nitsoaka nihazo iny lalana mihazo an’Andraharo iny. Fantatra, araka ny fampitam-baovao fa efa nandona fiara teny amin’ny faritra Ankadifotsy teny ilay fiara no nenjehina tamin’ny moto ka izao namoa-doza izao. Ahina ho nitsoaka ilay mpamily ka tsy nahafehy ny familiana intsony ka izao nifaoka olona teny Ankazomanga izao. Nentina teny amin’ny hopitaly HJRA avy hatrany ireo naratra ary efa notanana eny amin’ny borigadin’ny polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana kosa ilay mpamily nahavanon-doza. Manentana ny rehetra hatrany ny polisy mba ho malina sy hanaja ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana.Mpianatra eny amin’ny Oniversite…Rafenomanana Fidy, monina eny Ankazomanga ity niharam-boina ity. Mpianatra taona faharoa eny amin’ny sampam-piananara fitantanana (Gestion) eny Ankatso izy, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny fikambanan’ny mpianatra ao amin’ny sampam-pianarana fitantanana (Aegm). Vory lanona ny olona teny Ankazomanga sy ny manodidina raha nahita ity loza ity. Andrasana, araka izany, ny tohin’ny fanadihadiana ilay mpamily tompon’antoka tamin’izao loza mahatsiravina izao.J.C L’article Notanan’ny polisy ilay mpamily nahavanon-doza: tovolahy iray maty tsy tra-drano nofaohin’ny 4X4 a été récupéré chez Newsmada.
Miarahaba antsika mpamaky. Tsara raha resahina eto anio, ny momba ny « Comité local de développement » (Cld) , izay famatsiam-bola isaky ny distrika, mitentina hatrany amin’ny 250 hatramin’ny 300 tapitrisa ariary, isan-taona. Ny depiote no miahy sy manara-maso ireo tetikasam-pampandrosoana amin’io tetibola io. Misy amin’ izy ireo anefa no mivaona, ka manararaotra, manodinkodina izany. Lasa izy ireo indray tompon’ny tetikasa sy manapa-kevitra amin’ny fandaniana nefa tsy mandeha araka ny tokony ho izy akory izany. Io no mampihazakazaka ireo depiote teo aloha hirotsaka indray satria mihevitra izy ireo fa amin’ny alalan’io vola io no hamerenany izay lany amin’ny fampielezan- kevitra, amin’izao fotoana. Misy ireo fikambanana mitaky ny fanovàna famindra amin’ny fitantanana ny volan’ny Cld io. Tsy tokony hataon’ olom-bitsy ampihimamba intsony ny famatsiam- bolan’ny fampandrosoana eny ifotony amin’ny alalan’ny Cld. Tsy hiteraka vokatra hisitrahan’ny vahoaka eny ifotony ny fomba fitantana mifono fanodinkodinana ny Cld amin’izao fotoana izao. Tokony ho ireo olom-boafidy eny anivon’ny vondrom- bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana no hitantana io vola io manomboka izao satria izy ireny no tena mahalala ny laharam- pahamehana amin’ny asa fampandrosoana eny ifotony. Fanaovana zinona ny fahefan’ny Ben’ny tanàna sy ny mpanolotsain’ny tanàna eny ifotony, ary ireo lehiben’ny fokontany, ny tsy fanomezana azy ireo fahefana feno hanapaka sy hitantana ny Cld satria mbola tsy hita taratra hatramin’izao ny tena vokatr’izany. Albain Rabemananjara L’article Lakolosy hiaraha-midinika est apparu en premier sur AoRaha.
Masoivoho amerikanina: hiresaka ny tanora sy ny fiarahamonina ny « E-talk »
« Ny fiarahamonina manoloana ny fitarihan’ny tanora ». Io ny lohahevitry ny « E-talk », hotanterahin’ny masoivoho amerikanina eto amintsika, ny 16 jolay izao, eny Andranomena. Fiteny matetika ny hoe ny tanora ny hoavin’ny firenena. Araka izany, anisan’ny andrin’ny fampandrosoana ny tanora.Hita ho mihamaro ny hetsika hanentanana ny tanora amin’ny fitarihana amin’ny sehatra misy azy, toy ny amin’ny lafiny fihariana sy ny raharaha sosialy eny anivon’ny fiarahamonina. Haneho ny heviny sy hijoro vavolombelona amin’izany fitarihana tanora izany i Najaina Kanto Tovohasimbavaka.Mpisehatra amin’ny fampandrosoana ny tanora manodidina ny 5 taona sy mpilatsaka an-tsitrapo, Mpanazava eto Madagasikara, ny tovovavy. Miasa ao amin’ny fandaharanasan’ny mpilatsaka an-tsitrapon’ny Firenena mikambana izy sady mpikambana tao amin’ny fikambanana fampandrosoana ny tanora, antsoina hoe Youth First, nandritra ny 3 taona. Tanora mpitarika nisitraka ny fandaharanasa Mandela Washington Fellowship ihany koa izy, tamin’ny taon-dasa. Entanina manokana hanatrika izao famelabelaran-kevitra izao ny tanora.Landy R. L’article Masoivoho amerikanina: hiresaka ny tanora sy ny fiarahamonina ny « E-talk » a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Fikatonan’ny sisintany: Afa miditra eto ny Elefanta Ivoarianina saingy manaraka fepetra
Azo antoka fa hotanterahina eto Madagasikara ny lalao miverina hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, eo amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny Can 2022. Tsy misy intsony ny fisalasalana fa hatao eto Madagasikara ihany ny fihaonana miverina eo amin’ny Barea de Madagascar sy ny Elefantan’i Côte d’Ivoire. Lalao tafiditra amin’ny andro fahefatra amin’ny fifanintsanana ho an’ny Can 2022. Araka ny fanambarana nataon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), nomen’ny Aviation Civile de Madagascar (ACM), fahazoan-dalana manokana hiditra eto Madagasikara ny delegasiona ivoarianina, na mbola mikatona aza ny sisin-tanin’i Madagasikara. Raha tsy misy ny fiovana, ho tonga ny 15 novambra, ho avy izao ny Elefantan’i Côte d’Ivoire ka fiaramanidina manokana Airbus no hitondra azy ireo.Mety hiaraka higadona eto avokoa ny ekipa roa tonta satria avy hatrany hamonjy an’i Madagasikara izy ireo, raha vantany vao ho vita ny lalao mandroso, hatao ny 14 novambra ho avy izao.Nahazo fankatoavana avy amin’ny FifaNa izany aza, tsy maintsy misy hatrany ny fitiliana sy ny fizahana ara-pahasalamana atao amin’ireo mpilalao rehetra sy ny mpikambana rehetra ao anatin’ny delegasiona, mialoha sy mandritra ary aorian’ny baikon’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf). Tsiahivina fa hatao any amin’ny kianja Stadium Barikadimy Toamasina, ny talata 17 novambra 2020, amin’ny 4 ora tolakandro io lalao miverina eo amin’ny roa tonta io. Marihina fa efa nahazo fankatoavana avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa) io fotodrafitrasa any amin’ny faritra atsinanana io. Ankoatra izay, tsy hihoatra ny 5000 ny totalin’ny olona afaka miditra ao anaty kianja, hanatrika io fihaonana miverina io.Efa nalefan’ny federasiona malagasy ny baolina kitra any amin’ny Caf sy ny federasiona ivoarianina (Fif) ny valin-teny momba io fahazoan-dalana manokana hidiran’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire eto Madagasikara io. TompondakaL’article Kitra – Fikatonan’ny sisintany: Afa miditra eto ny Elefanta Ivoarianina saingy manaraka fepetra a été récupéré chez Newsmada.
Bakalorea teknika: 5 529 ny mpiadina eto Antananarivo
Hiroso amin’ny andiany fa­haroa amin’ny bakalorea ny fampianarana teknika manerana ny Nosy, manomboka ny alatsinainy ho avy izao. 10 141 ny isan’ny mpiadina rehetra ka 5 529 amin’ireo, eto An­tananarivo avokoa. Ma­nom­boka ny alatsinainy ary maharitra hefarana ny tapany faharoa: ny comptabilité sy ges­tion, ny commerce, ny te­chnologie, ny secrétariat… anisany amin’ny lalam-piofanana atrehina. Foibem-panadinana handray ny mpiadina ny ivontoeram-pampianarana tek­nika eto an-dRenivohitra ary efa miomana amin’ny fandaminana ny tomponandraikitra, araka ny fanazavana azo. Ity andiany faharoa ity no tena mampiavaka ny fampianarana teknika ary ambony avokoa ny «coefficient» amin’ ireo taranja isanisany mampiavaka ny “spécialité”. Efa miroso amin’ny fitsarana ny taratasim-panadinana ho an’ ny andiany voalohany amin’ ny fampianarana ankapobeny sy teknika kosa ireo tomponandraikitra, nanomboka anio, rehefa vita ny fifanarahana teo amin’ireo mpitsara rehetra.VonjyL’article Bakalorea teknika: 5 529 ny mpiadina eto Antananarivo a été récupéré chez Newsmada.
Amparihy: telo lahy nahatrarana taolam-paty roa gony
Noraisim-potsiny! Saron’ny polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’i Taolagnaro ireo telo lahy voarohirohy amina raharaha halatra taolam-paty, ny asabotsy tolakandro teo. Raha ny fampitam-baovao nampitain’ny polisy, nandritra ny fanatanterahana ny asa fisafoana nataon’izy ireo, ny nahatrarana ireto telo lahy ireto niaraka amin’ny gony roa mampiahiahy tao Amparihy Taolagnaro tamin’io fotoana io. Niroso avy hatrany tamin’ny fisavana azy ireo ny polisy raha vantany vao nahatazana ny gony nentin’izy ireo. Hita tao anatin’ireo gony miisa roa ireo ny taolam-paty lava miisa miisa 167. Nosamborina avy hatrany ireto telo lahy ary nentina nihazo ny biraon’ny polisy hanaovana fanadihadiana sy hahafantarana marina ny toerana niavian’ireto taolam-paty marobe ireto. Andrasana, araka izany, ny tohin’ny fanadihadiana ataon’ny polisy momba ity raharaha halatra taolam-paty ity.Jean ClaudeL’article Amparihy: telo lahy nahatrarana taolam-paty roa gony a été récupéré chez Newsmada.
Kolontsaina sy fialamboly: hanatanteraka “Samdi full” ny Tiagasy
Asabotsy faran’ny volana… Maro ny seho isan-karazany amin’io faran’ny herinandro io. Anisan’izany ny “Samdi Full,” hotanterahina etsy amin’ny Espace Fitiavana & Fialamboly Ambatomirahavavy RN1, ny asabotsy 31oktobra 2020 tontolo andro. Ho hita eny avokoa ny karazana fialamboly mifono kolontsaina hanalana ny sorisorin-tsaina nandritra izay volana izay, indrindra amin’izao fisokafan’ny hamehana ara-pahasalamana izao, raha ny filazan’ny tompon’andraikitra.Anisan’izany ny tontolon’ny filalaovana gitara, ny “karaoke live”, ny fanentanana sy ny fampandihizana tahaka ny “animation DJ”, sns. Eo ihany koa ny tontolon’ny fanatanjahantena toy ny basikety, ny tsipy kanetibe… Misy toeram-pilalaovana ho an’ny ankizy toy ny “château gonflable”, ny “trampoline”… Ny alina, hisy ny “soirée Halloween” sy ny “maquillage artistique” iarahana amin’ny Bis’art Design Studio.“Samdi full”, hetsika karakarain’ny Tiagasy, fikambanana ray aman-dreny sy tanora vitsivitsy misehatra amin’ny fifampitsimbinana sy ny soatoavina fifanampiana amin’ny samy Malagasy. Tanjon’izy ireo ny hanampy tsikelikely ireo ankizy sahirana amin’ny fampianarana, ny fitsaboana, ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fitafy sns.NarilalaL’article Kolontsaina sy fialamboly: hanatanteraka “Samdi full” ny Tiagasy a été récupéré chez Newsmada.
Kaominina fito ao Amboasary: omena sakafo ireo olona 70 000 reraky ny hanoanana
Velom-panantenana fa ho afaka amin’ny tsy fanjarian-tsakafo miteraka hanoanana lalina sy fahiazana ho an’ny ankizy ny ao Amboasary rehefa nahita ny fahatongavan’ny sakafo avy amin’ny Pam. Hisitraka izany ireo kaominina fito ao an-toerana. Tonga tsikelikely any amin’ny distrikan’Am­bo­asary any atsimon’ny Nosy ny sakafo avy amin’ny Pam entina hamatsiana ireo mponina efa reraky ny hanoanana any an-toerana. Miisa 70 000 ireo olona omena sakafo isan’andro ao anatin’ny kaominina fito ao anatin’izany distrikan’Amboasary izany. Anisan’ny misitraka ny sakafo entin’ny Pam ny kaominina Maromby, i Ranobe, i Elonty, i Tomboarivo, i Ma­ro­tsi­raka, i Mahabo ary i Tra­no­maro. Tokantrano miisa 14 000 ao anatin’ireo kaominina ireo no hizarana sakafo. Ahitana vehivavy bevohoka sy mampinono miisa 3 500 ary ankizy eo anelanelan’ny 6 ka hatramin’ny 23 volana tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mivaivay ny hahazo izany. Ity fanampiana vonjimaika entin’ny Pam any atsimo ity dia tohin’ny fanairana voarain’izy ireo indray hatramin’ny herinandro ambony iny. Efa mihatrana eny an-toerana ireo ekipa mpandrindra rehetra mitsinjara izany sakafo mi­tondra hery ho an’ireo mponina any Amboasary izany. Mitondra fanantenana sy hery ho an’ireo olona 70 000 any Amboasary, araka izany, ny fahatongavan’ny fanampi­a­na ary mifandraika amin’ny filana any an-toerana manolo­ana ny hamehana ara-tsakafo mihatra amin’ny mponina. Marihina fa nanomboka ny alatsinainy 19 oktobra, efa nisitraka sakafo mafana ara-pahasalamana mitondra hery ny mponina ao amin’ireo kaominina fito ireo. Any amin’ny fokontany Andavabazaha ko­sa, ankizy efa tena mahia sy reraky ny hanoanana noho ny tsy fahampian-tsakafo any an-toerana no nahazo hery indray rehefa notohanana sakafo. Rehefa nahazo fanairana ny Pam mikasika ireo ankizy marefo tanteraka ireo, nidina nijery haingana sy nitondra ny sakafo mitondra hery. Raha ny tatitra, mahia sy tsy ampy sakafo avokoa ny 41%-n’ny ankizy ao amin’ny kaominina 16 ao Amboasary ka anton’izao hamehana any atsimo izao.Tatiana AL’article Kaominina fito ao Amboasary: omena sakafo ireo olona 70 000 reraky ny hanoanana a été récupéré chez Newsmada.
Fandriampahalemana: hanampy ny Tafika an-dranomasina ny Japoney
Tonga nitsidika ny lehibe’ny Etamazaoron’ny Tafika an-dranomasina, ny capitaine de vaisseau GA Jacquy Honoré, teny amin’ny toeram-piasany eny Ambohidahy, ny masoivohon’i Japon miasa eto Madagasikara, i Higuchi Yoshihiro, omaly. Votoatin’ny fihaonana ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena malagasy sy i Japon izay efa nisy hatramin’izay. Nisongadina tamin’izany ny fiaraha-miasa amin’ny fampandriana fahalemana an-dranomasina. Misampana amin’ny sehatra marolafy rahateo ny fiaraha-miasa eo amin’i Japon sy i Madagasikara, isan’izany ny fandriampahalemana sy ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina. Nampahafantarin’ity masoivoho ity ny tetikasa “Initiative de l’Océan Indo-Pacifique libre et ouvert » miompana amin’ny fampanjakana ny filaminana an-dranomasina. Fanirian’i Higuchi Yoshihiro ny fifanakalozana eo amin’ny Tafika an-dranomasin’ny firenena roa tonta amin’ny alalan’ny fandalovan’ny sambo japoney eto Madagasikara. “Firenena afaka mandroso i Madagasikara noho ireo harena misy ao aminy”, hoy izy. “Mivoatra ihany koa ny iraka ankinina amin’ny Tafika an-dranomasina. Mandray endrika roa izany andraikitra izany. Eo ny andraikitra maha miaramila: ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ny fari-dranomasina ary ny toekarena: ny asa fampandrosoana ny firenena amin’ny alalan’ny toekarena manga”, hoy ny Jly Jacquy Honoré.Jean ClaudeL’article Fandriampahalemana: hanampy ny Tafika an-dranomasina ny Japoney a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny kolikoly :: Nanolotra vahaolana ho an’ny Fitsarana ny HCDDED
Nandroso vahaolana maromaro hoentina misoroka ny kolikoly eny anivon’ny Fitsarana ny Filankevitra ambony ho an’ny fanjakana tan-dalàna, ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana (HCDDED). Torohan’io filankevitra io mantsy « ny fahapotehan’ny Fitsarana noho ny kolikoly eto amintsika amin’izao fotoana izao ». Nandritra ny atrikasa notanterahin’ireo mpikambana eo anivon’ny HCDDED, teny Ampefiloha, omaly, no nanaingany ny minisiteran’ ny Fitsarana mba hanaparitaka ny taratasy fanentanana amin’ny fanajàna ny etika ara-maoraly hialana amin’ny kolikoly eo anivon’ireo rafi-pitsarana eto amintsika. « Eo ihany koa ny fisakanana ny kiantranoantrano amin’ny fampidirana ny fianakaviana mpitsara ao anatina rafi-pitsarana iray. Zava-dehibe koa ny fanomezana vahana ny fanatanterahana ny Dina », hoy i Imbiky Anaclet, zokiolona ao amin’ny HCDDED, izay isan’ireo nitarika ny atrikasa nitondrana ny lohahevitra « Fanjakana tsara tantana ». Efa manomboka mijery vahaolana amin’io kolikoly manimba endrika ny fianakaviamben’ny Fitsarana io ny minisitera, amin’izao fotoana izao. Isan’izany, ohatra, ny fidirana an-tsehatry ny Filankevitra ambonin’ ny mpitsara tamin’ny famindrana ny raharahana andramena niampangana mpandraharaha iray. L’article Ady amin’ny kolikoly :: Nanolotra vahaolana ho an’ny Fitsarana ny HCDDED est apparu en premier sur AoRaha.